Estranged: Chiito II yemahara yemitambo yevhidhiyo mutambo | Linux Vakapindwa muropa
Estranged: Chiito II wemahara mutambo wevhidhiyo mutambo
Yakagadziriswa: Mutemo II ndiye wekutanga-munhu mutambo wevhidhiyo mutambo ine inonakidza magiraidhi izvo zviripo zviripo mahara. Unogona kuikanda kubva kuchitoro cheValve, chiutsi. Inowanikwa kune ese macOS, Windows, uye SteamOS (uye Linux).
Sanganisa ushingi pamwe nezvimwe zvinotyisa madhayi nemapuzzle, uye zvese nekuda kwebasa rakanaka remugadziri Alan Edwardes. Pasina kupokana zita rinonakidza iro rakakodzera kuyedzwa, mukuwedzera, sezvo iri yemahara, hapana chaucharasikirwa nacho. Asi zvirokwazvo uchahwina nguva yakanaka yevaraidzo, nekuti yakanaka chaizvo ...
Recuerda, que Yakagadziriswa: Ita I yakatevera nyaya yemureri akasungwa pachitsuwa chisinganzwisisike panguva yedutu rine simba kwazvo. Zvino, mutambo wevhidhiyo unotevera chiitiko chakatangwa mumusoro wekutanga, apo mubati wehove ane hushingi paanoedza kudzokera kumba, asi anomhanyira mukambani yakavanda inonzi Arque, uye anoongorora zvekare zvakavanzika zvine njodzi.
Panguva ino, Yakarongedzwa: Chiito II chiri chete Kuwana Kwekutanga yaunofanira kugutsikana nayo kusvika Chivabvu 22. Asi iri kusiya kuravira kwakanaka kwazvo mumiromo yeavo vanozviedza, nekuti pane Steam pane zviuru zvemashoko evashandisi uye ivo vakanaka kwazvo. Naizvozvo, zvinotevera maitiro ehuremu hwakakwira hwakawanikwa neMutemo I uye ayo anopfuura mamirioni matanhatu mhinduro dzakanaka papuratifomu yeValve.
Kunyangwe Estranged: Chiito II paSteam chave chemahara, haizove Mahara Kutamba mutambo wevhidhiyo sevamwe, ndokuti, hazvingagare zvakasununguka nguva dzose. Mutengo kana uchinge waburitswa unenge wave madhora matanhatu kana € 6. Asi chinhu chakanaka ndechekuti chero munhu anozvirodha pamberi pacho anokwanisa kuzvichengeta zvakasununguka. Naizvozvo, usaisiya mazuva akawandisa uye ubate uyu mutambo wevhidhiyo unovimbisa ... zvikasadaro uchafanira kubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Estranged: Chiito II wemahara mutambo wevhidhiyo mutambo
Audacity 2.3.3 ndiyo zvakare iri yepamusoro-kudhara vhezheni. Iyo purojekiti inodzokera pasi nekuda kwechirwere chakakomba
Minecraft: gumi nerimwe makore akabudirira eiyi budiriro yeSweden